थोर श्रोक: अर्को इन्टरनेट करोडपति? | Martech Zone
थोर श्रोक: अर्को इन्टरनेट करोडपति?
आइतबार, जुन 24, 2007 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
ब्लगिंग मित्र, थोर श्रोक, को लागि दौड मा छ अर्को इन्टर्नेट मिलियनेयर!
थोर चाँडै टेक्नोलोजिष्टहरूको लागि एक महान संसाधन भएको छ। मलाई लाग्छ कि म थोर र उसको ब्लगलाई यति धेरै मन पराउनुको एक कारण यो हो कि उनी यसलाई बढावा दिन आक्रामक छन् तर नम्र र मित्रैलो व्यवहार उसले गर्छ। उसले एक पटक मात्र मलाई ईमेल पठाउने छ - तर यो सँधै व्यक्तिगत, विचारशील र पढ्न मनपर्दछ।
थोरले आज मलाई लेखेका छन् र उसलाई अर्को इन्टरनेट मिलियनेर बनाउनको लागि तपाईंको मद्दत चाहिन्छ! मलाई विश्वास छ कि उसको ड्राइभ र उत्साहले उनलाई त्यहाँ लैजानेछ प्रतिस्पर्धा होस् वा नहोस्।
को लागि मतदान गर्नुहोस् थोर श्रोक, अर्को इन्टरनेट करोड़पति! थप गर्न निश्चित गर्नुहोस् थोरको ब्लग तपाईंको पाठकलाई पनि! मेरो लागि को रूप मा, म सिर्फ अर्को इन्टरनेट सयौं-हजारपति हुन खुसी हुनेछु।
म एक YouTubotato हुँ
एकल सेवा गर्ने रेस्टुरेन्टहरू कहाँ छन्?
जुन 24, 2007 मा 2: 46 PM
लेख्न र प्रशंसा डग को लागी धेरै धन्यबाद! यसको अर्थ मेरो लागि धेरै हो र मैले गत बर्षमा तपाईंको ब्लगबाट धेरै सिकेको छु।
मलाई थाहा दिनुहोस् यदि त्यहाँ मँ तपाईंको लागि गर्न सक्ने केहि पनि छ भने!
जुन 25, 2007 मा 10: 46 PM
बधाई हो थोर,
जुन २,, २०१ बिहान :26:२२ बिहान
सुरुमा म पनि अर्को इन्टरनेट मिलियनेर फर चलाउन लागिरहेको थिएँ तर यसको सट्टा अरबपति जाने निर्णय गरें !!
अरू कसैलाई जस्तै जो एक मिलियन वा बिलियन डलर विचारको साथ आउँदछ यसलाई सधैं पैसा लिन्छ जस्तो देखिन्छ यसलाई बनाउनको लागि! एउटा विचार मैले पुनः गरें: फ्ल्यास स्लाइडशो अर्को को को लागी उपयोगी साबित भएन। त्यो तुरुन्तै माइस्पेसले $ १० वा M २० मिलियन डलरमा किनेको छ - त्यसैले यो हुन सक्छ! म अझै पनी मेरो विचार ढोकाबाट बाहिर निकाल्न चाहन्छु किनकि यो मान्य छ + याहु जस्तो प्रतिस्पर्धीहरू! वा गुगल वा माइक्रोसफ्ट (व्यक्ति जसले वास्तवमा चेक काट्न सक्दछ !!
म निश्चित रूपमा थोरको ब्लग चेकआउट गर्नेछु!
चियर्स !! बिली;))
अर्को इन्टर्नेट मिलियनेयर
जुन 26, 2007 मा 3: 59 PM
सबैले निश्चित रूपले थोरलाई भोट दिनु पर्छ। उहाँ एक महान मान्छे हो र मेरो नेक्स्ट इन्टर्नेट मिलियनेर बिग एक्शन पोडकास्टको लागि एक अद्भुत अन्तर्वार्ता।
निश्चित रूपमा यसलाई जाँच गर्नुहोस् र थोरको अडिसन भिडियो १० लाई मूल्या rate्कन गर्नुहोस्। उहाँ एक ठूलो मान्छे हुनुहुन्छ जसले एक ज्याकस बिना नै ठूलो कार्यवाही गर्दछ!